1 December – Maalinta caalamiga ee AIDS-ka | Radio Himilo
Home / Caafimaad / 1 December – Maalinta caalamiga ee AIDS-ka
1 December – Maalinta caalamiga ee AIDS-ka
Posted by: Mahad Mohamed December 1, 2019
Himilo- Kowda bisha December sannad kasta taniyo sanadkii 1988-kii, waa maalin caalami ah oo loogu dow-galay sare-u-qaadista wacyiga la xiriira cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka kaas oo ku fidaya feyraska halista ah ee HIV-ga iyo in sidoo kale in loo baroordiiqo dadkii ku dhintay cudurkan.
Illaa iyo sanadkan, AIDS-ku wuxuu dilay tiro u dhaxeysa 28.9 milyan illaa 41.5 milyan oo qof oo dunida dacalladeeda ku kala nool. Halka tiro lagu qiyaasay 36.7 milyan oo qof ay la nool yihiin feyraska HIV taas oo ka dhigtay mid kamid ah ol’olayaasha ugu muhiimsan ee sanad walba la iskugu yeero in la qiimeeyo lana tacaalo bukaannada u il-daran.
Mahad-gaar ah waxaa laga celinayaa kororka baahaya ee dawadiisa oo meelo badan oo dunida kamid ah laga heli karo. Dadka u dhinta cudurkan wuxuu hoos u dhacayay taniyo sanadkii 2005 oo uu ahaa 1.9 milyan marka lala barbar-dhigo hal milyan oo sannadkii 2016 lagu qiyaasay.
Dadka cudurkan la nool waxay noolaan karaan in ka badan inta laga filan karo. Tez Anderson oo muddo ka badan 30 sano la nool cudurkan ayaana kamid ah. Sida uu ku qoray maqaal lagu daabacay mareegta Time.com, Anderson wuxuu sheegay inuu muddo badan ku qaatay qorsheynta geeridiisa. Dhaqaatiirtu waxay u sheegeen inay noloshiisu ka dhimman tahay laba sanno oo kaliya.
Balse ugu danbeyn wuxuu garowsaday in wali noloshiisa ay ka dhimman tahay waqti uusan hubin sida kuwa aan qabin AIDS-ka.
Previous: Maqal- Bar Aqoon-kaal
Next: Mareykanka: Qofkii ugu da’da weynaa oo geeriyooday